Budata Dragball APK maka Android
Dragball bụ egwuregwu nka emepụtara maka gam akporo.
Dragball, nke onye nrụpụta egwuregwu Turkey Mertkan Alahan mere, bụ otu nime egwuregwu na-atọ ụtọ. Ebumnuche anyị negwuregwu ahụ bụ iziga bọọlụ ọ bụla nakụkụ nke ya. Maka nke a, anyị kwesịrị ịdọrọ ahịrị dị iche iche nihu ha. Agbanyeghị, anyị anaghị ahụ otu bọọlụ notu oge. Ka bọọlụ ndị nwere agba dị iche iche na-abata nọhịa na mberede, aka anyị nwere ike ịgagharị nụkwụ anyị. Nagbanyeghị nke ahụ, a ghaghị ikwu na nke a bụ ihe na-atọ ụtọ nke egwuregwu ahụ.
Na Dragball, ị nwere nkeji 4 iji zipu bọọlụ ndị ahụ na nkuku nke otu agba ahụ site na ịse ahịrị ndị nwere ike ime na ihuenyo. Noge a, ọkụ ọkụ nwere ike ịbara gị uru ga-apụta na ihuenyo. Soro ndị enyi gị nwee egwuregwu ahụ! Ụdị Co-op na Versus ọtụtụ ọkpụkpọ dị.
Mmepụta: Tryharder Media